Ra’iisul Wasaare Saacid oo Taariikh u dhigay Ra’iisul Wasaarayaashi soo maray dalka 21-kii sano – idalenews.com
Ra’iisul Wasaare Saacid oo Taariikh u dhigay Ra’iisul Wasaarayaashi soo maray dalka 21-kii sano
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon ayaa wali ku guda jira socdaalada uu ku tagayo gobolada dalka, iyadoo maanta lagu wado inuu booqdo Gobolka Gedo ee Koofur Galbeed Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaare Saacid ayaa lagu wadaa in diyaarad ay ku tagaan degmada Garbahaarey ee xarunta Gedo, halkaasoo uu ka soo jeedo Ra’iisul Wasaaruhu, si uu xoojiyo siyaasadiisa arrimaha gudaha.
Shalay ayay aheyd markii Ra’iisul Wasaaruhu booqday magaalada Jowhar iyo Balcad ee Gobolka Shabellaha Dhexe, halkaasoo si weyn loogu soo dhoweeyay wafdiga Ra’iisul Wasaaraha.
Qaban qaabo lagu soo dhoweynayo Ra’iisul Wasaaraha ayaa ka socota Garbahaarey, iyadoo ammaanka si aad ah loo adkeeyay, Gedo ayaa ka mid ah gobolada dowladda la wareegtay sanadkii 2011, waxaana ay gacanta ku hayaan degmooyinka ugu badan ee gobolaas.
Mr Saacid ayaa rikoorka safarada gudaha dalka ka qaaday Ra’iisul Wasaarihii hore Cali Maxamed Geeddi oo horay u tagay Beledweyn, Jowhar, Galkacyo, Afgooye, Garowe, Boosaaso iyo Baydhabo, inkastoo aan meelaha qaar uusan tagin.
Booqashada Ra’iisul Wasaaraha ayaa loo arkaa is bedel siyaasadeed oo dowladda u qaadeyso arrimaha gudaha, isla markaana dadka deegaanka ay siineyso ahmiyad gaar ah oo ay codkooda ku dhageysaneyso, isla markaana ugu soo gudbin karaan madaxda sare wixii tabasho ay qabaan ama cadaalad daro.
Shirweynaha Kismaayo oo dib u furmayo iyo Ergooyinkii ka maqnaa oo la soo dhameystiray